E-commerce zvigadzirwa zvinogona kugadzirira huchenjeri hwekugadzira | ECommerce nhau
Hapana mubvunzo kuti Artificial Intelligence uye kumwe kufambira mberi kwetekinoroji senge chokwadi chaicho kana chokwadi chakawedzerwa chiri kutora nyika yekutengesa nedutu.
Sezvo izvi tech zvimiro zvinokura zvese mukukosha uye kukosha mumwedzi iri kuuya, zvakakosha kuti eCommerce mabrands kuti vazvishingise.
1 Unofanirwa kugadzira
2 Ipa vatengi vako shopper yako
3 Chiyero pakati pekuvanzika uye kuvimba
4 Robotic hurukuro
Mumoyo ma e-commerce maitiro akanakisa kune hunyanzvi. Iko hakuna kushomeka kwekuti vatengesi vatora sei pfungwa yehunyanzvi.
Tinogona kutanga kuona kuti hunyanzvi uye kupindira kwetekinoroji mumabasa ezuva nezuva evashandisi pane yako eCommerce saiti inogona kutanga kuita kuti zita rako rimire uye rive rinonyanya kubatsira kune vateereri vako.
Ipa vatengi vako shopper yako
Nzira yakasarudzika yeku fungidzira AI ndeyokugadzira ruzivo rwevashandisi kutenderedza rubatsiro rwekunze pane kungo tsvaga pasina pa e-commerce yako saiti.
Chiyero pakati pekuvanzika uye kuvimba
Chinhu chinoshamisa pamusoro peArtificial Intelligence ndeyekuti kune mikana yakawanda yekugadzirisa ruzivo rweumwe mushandisi.
Kubva pane zvakagadzirwa zvigadzirwa neGoogle yekushambadzira kushambadziro kune akavakirwa-mukati makarenda uye traffic yambiro, vanhu vanogona kunyatsonzwa sekunge vari kuwana yakasarudzika mushandisi ruzivo uye rutsigiro kubva kune yako tekinoroji.
Isu tese tinoziva kuti mapuratifomu ehurukuro ave kuwedzera kukosha kune bhizinesi, uye kunyanya kune e-commerce mawebhusaiti.
Chat bots Vanogona kubvumidza kufamba kuri nyore pane yako saiti, kupindura mibvunzo nekukurumidza kubva kune vashandisi, uye nekupa kurudziro kunoenderana nekuferefeta kutsva kana kushanya kwekare kune yako saiti.
Chinokosha apa ndechekuti kutaurirana kunonzwa zvakanyanya sechiitiko chevatengi chevanhu uye kunovandudza yako sevhisi sevhisi pamatanho ese, sezvo AI inogona kutowanikwa zvakanyanya kune chero zvido zvinoitika zvinomuka pane yako saiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Ecommerce brand inogona kugadzirira huchenjeri hwekugadzira
Zvikonzero nei e-commerce yakakosha kune rako bhizinesi